I-Kellsborough Mill, Kiln Room Self-catering Studio - I-Airbnb
I-Kellsborough Mill, Kiln Room Self-catering Studio
Kells, Kilkenny, i-Ireland
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Andrew
Wamukelekile ukuthi ujabulele ukuhlala esitudiyo esinethezekile esizimele nesokuziphekela endaweni eyingqophamlando i-Kellsborough (ngaphambili eyake yaba i-Hutchinson's) Mill, osebeni lomfula iKing's edolobhaneni elinokuthula lase-Kells, County Kilkenny. Ukuhamba ngemizuzu eyi-12 kuphela ukusuka eKilkenny City ehlala idumile.
Isitudiyo se-Kiln-view sinekhishi laso elihlome ngokuphelele, itafula lokudlela nezihlalo, i-en-suite yokugezela (eneshawa), i-TV, i-WiFi kanye nombhede ophindwe kabili ongangenkosi. Umbhede wengane owengeziwe, noma umbhede ogoqwayo uyatholakala uma ucelwa.
Indawo ehlaba umxhwele enezitezi ezinhlanu, ibheke i-Kells Priory - enye yezikhumbuzo ezinkulu nezihlaba umxhwele kakhulu zenkathi ephakathi e-Ireland futhi indawo eyingqayizivele ihlanganisa izitudiyo ezimbili ezidalwe umakhi wendawo owine imiklomelo. Amayunithi ohlobo olulodwa aklanywe ngokunethezeka nokunethezeka futhi abonisa izici ezihlukile ezivela kumagugu ezolimo wesakhiwo.
Lesi sigayo esiyingqophamlando sakhiwa cishe ngo-1810 futhi kuthiwa sinommbila osuka endaweni ezungezile, ukuze unikeze amasosha ngesikhathi sempi yamaNapoleon. Ngemuva kweminyaka eminingi yokungalali, lesi sakhiwo siye savuswa kanzima njengendawo yokuhlala yangasese. Ukulungiswa kwezicaciso eziphezulu kuye kwaklanywa ngezimiso ezisimeme zamandla aphansi kanye nokugcizelelwa komthelela ophansi kanye nezinto zemvelo.
Ukugxila kwemvelo kuyaqhubeka ngokushisisa namanzi ashisayo ahlinzekwa yimithombo evuselelekayo (ugodo) ubusika bonke namashubhu elanga ehlobo. Izinsiza zokuhlunga ezigcwele zokugaywa kabusha kukadoti, ukwenza umquba njll.
Qaphela: Uma lesi situdiyo sibhukhiwe, ungase ube nentshisekelo ku-Millrace studio naku-Kellsborough Mill
ubusuku obungu-7 e- Kells
Kanye ne-Priory ethatha umoya, i-Kells Village ebukekayo icwile emlandweni futhi yafakwa njengengemuva lokuqoshwa kwezingxenye zefilimu ka-Stanley Kubrick ethi Barry Lyndon edlalwa u-Ryan O'Neal. Owake wayikhaya lombhali u-Wesley Burrowes, leli dolobhana kuthiwa linikeze ugqozi kubalingiswa abaningi emibhalweni yakhe ethi "The O'Riordans" - omunye wemidlalo yaseshashalazini ephumelela kakhulu ye-TV yase-Ireland. Muva nje idolobhana lijabulela ukuduma njengekhaya 'le-Reign of Terror', okuyisithiyo saminyaka yonke (www.reignofterror.ie) njalo ngo-Okthoba. Izinsiza zasendaweni edolobhaneni zifaka i-pub ephilayo kanye nesitolo sendawo sokudla.
Ababungazi bakho bazobe bekhona ukuze bakwamukele e-Kellsborough Mill futhi bakukhombe indlela eya ezindaweni eziningi ezikhangayo zase-Kells kanye nendawo ezungezile.